Unganidza yako Xbox One controller kuMac yako | Ndinobva mac
Iwe unogona pakupedzisira kubatanidza yako Xbox One controller kuMac yako
Miguel Angel Juncos | | Accessories, apuro, Tutorials
Pasina nguva refu takakuratidza kuti sei batanidza mutungamiriri wePS4 kuMac yako kutamba chimiro chakanyanya ergonomic kune ese marudzi emitambo paOS X. Zvisinei, kune vazhinji venyu iyo Sony controller dhizaini haina kunyanya kukwezva kutarisisa kwako maererano nekunyaradzwa, kusarudza yapfuura Xbox One controller dhizaini yekutamba. Saka chii chinoitika kana tichida kushandisa iyo nyowani Xbox One controller, nekuti hakuzove nedambudziko pakuzviita asi kusiyana nePS4 controller, Xbox One controller inoda kuzobatana neMac kuburikidza ne USB tambo.
Mune ino kesi hatizombove nemukana wekuibatanidza kuburikidza nePulagi uye Tamba kuti kana iwe uine mutungamiriri wePS4, asi kune rimwe divi kune mapurojekiti asiri echokwadi anotibvumidza kubatanidza mutongi tichichengeta zvese kana zvirinani zvacho zvinoshanda, senge Xone-OSX chirongwa chakagadzirwa naFranticRain.
Kuisa software inoita kuti kutonga kutariswe nehurongwa, zvese zvatinofanirwa kuita kuenda kune iyo Xone-OSX peji kubudikidza nechisungo ichi uye dhawunorodha iyo vhezheni yakamisikidzwa yekumhanyisa iyo yekuisa package uye uteedzere mirairo pachiratidziri. Kana zvese zvaitika kuiswa ticha tangazve iyo midziyo yekutarisa neremote control yakatungamira mwenje kumusoro.
Chinhu chinotevera chinenge chiri chekuenda kune iyo sisitimu inofarira mapaneru, kwatinozoona chikamu chitsva yakaiswa inonzi Xone Controller, iyo yatinozogadzirisa mabhatani, joysticks ...
Iyo yakashata ndeyekuti kwete 100% inoenderana nemitambo yese, saka mune mamwe ichashanda zvishoma kana kuti zvakaringana haizoshanda. Nekudaro, mune vese avo ini ndakave nemukana wekuyedza vakashanda zvakakwana. Pamusoro pezvese izvi, zvakakoshawo kuti uzive kuti hazvizowedzere mabhatiri kana bhatiri kunyangwe kana yakabatana ne USB sezvo ichingotakura data
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Iwe unogona pakupedzisira kubatanidza yako Xbox One controller kuMac yako
Mhoro! Kana kurodha pasi iyo .zip package, mune iyo REEDNE.md faira inoti kumhanya iyo inosimudza. Asi ini handizive kuti chii chinomisikidza. Mafaira maviri uye mafaera matatu anoonekwa (2 kubva .md uye imwe iri rezinesi ...) Kana iwe ukagona kujekesa mubvunzo wekuti ungaiisa sei, zvinogona kubatsira zvakanyanya. Ndokutenda zvikuru!
EZCast, iyo yakanakisa sarudzo kune smart tv